Katie Wehr - McKnight Foundation
Soo deji Headshot
Sarkaalka Barnaamijka Sare
Katie Wehr waxa ay ku biirtay McKnight Feebarwari 22, 2022 iyada oo ah sarkaalka sare ee barnaamijka ee Barnaamijka Bulshooyinka Firfircoon iyo Sinaanta. Doorkan, waxay kormeertaa oo ay horumarisa faylalka deeqaha waxbarasho ee cusub si ay u dhisto mustaqbal firfircoon oo loo siman yahay dhammaan reer Minnesota-mustaqbal leh awood la wadaago, barwaaqo, iyo ka-qaybgal.
Katie waxa ay shaqadeeda u hibaysay qaabaynta, maalgelinta, iyo qiimaynta xalalka ku jihaysan nidaamka ee xoojiya wanaagga iyo dhimista sinnaan la’aanta bulshada iyo dhaqaalaha, iyada oo la kaashanaysa bulshooyin kala duwan. Ku dhawaad 12 sano, waxay u adeegtay sarkaal sare oo barnaamij ka ah Robert Wood Johnson Foundation, halkaas oo ay diiradda saartay horumarinta caafimaadka iyada oo loo marayo cilmi-baaris, ku-dhaqan, iyo qalab siyaasadeed. Doorkan, waxay ku hogaamisay, qaabaysay, oo ay maamushay in ka badan $100M sanad walba maalgelinta istaraatiijiga ah ee muhiimka u ah horumarinta xaaladaha bulshada. Intii ay halkaas joogtay, waxaa loo magacaabay saaxiibo iyada oo qayb ka ah Machadka Terrance Keenan ee Hogaamiyaasha Soo Koraya ee Deeqaha Caafimaadka.
Kahor inta aysan ku biirin Robert Wood Johnson Foundation, waxay wakhti ku qaadatay Waqooyiga Carolina iyo Florida iyada oo ka shaqaynaysay mashaariic kala duwan oo bulshada ku salaysan oo la xidhiidha caafimaadka hooyada, ilmaha, iyo qoyska. U adeegida xubin AmeriCorps waxay ahayd waayo-aragnimo horumarsan shaqadeeda caafimaadka bulshada, sidoo kale waaya-aragnimadeeda ku noolaanshaha, waxbarashada, iyo ka shaqaynta Jarmalka iyo Koonfur Afrika.
Waxaa lagu soo barbaaray miyiga Iowa, Katie waxay shahaadada caafimaadka bulshada ka heshay caafimaadka hooyada iyo dhallaanka Jaamacadda North Carolina-Chapel Hill, waana Phi Beta Kappa oo ka qalin jabisay cilmiga bulshada ee Jaamacadda Illinois Wesleyan. Haddii ayan bannaanka soo bixin, waxaad ka heli kartaa iyada oo la karinaysa asxaabta iyo qoyska, iyada oo u socdaalaysa adduunka, ama sahaminta fanka, masraxa, iyo dhacdooyinka muusiga.